Sarcoidosis သုတေသနကန့်သတ်သည် - sarcoidosis ရှားပါးခြင်းနှင့်လွဲရောဂါဖြစ်ပါသည်နှင့်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများသည်သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်များကထံမှလုံလောက်သောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံယူမထားဘူး။
SarcoidosisUK သေးငယ်တဲ့ဖြစ်နိုင်သည်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ sarcoidosis သုတေသနတစ်ဦးဦးဆောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ကြ၏။ ကျနော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအနည်းဆုံးအဓိက sarcoidosis သုတေသနစီမံကိန်းအတွက်ရန်ပုံငွေလုံလောကျပိုကျဆံမြှင့်ဖို့ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်မှုသေချာစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနဘတ်ဂျက်နှစ်ဆသောသူသည်ဗြိတိသျှအဆုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမကအစိုးရရန်ပုံငွေကိုလက်ခံရရှိ - ဤသုတေသနသင့်ရဲ့ရက်ရက်ရောရောအလှူငွေမပါဘဲဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ SarcoidosisUK sarcoidosis တိုက်ခိုက်နေဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိသုတေသနစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. Read more:
ပရိုတိန်းမော်လီကျူးများနှင့် Hull York က Medical School မှကိုယ်ခံစွမ်းအား